R/wasaaraha Ingiriiska David Cameron: "TFGDa way fashilantay,
Posted by admin on November 15 2011 10:44:34
HS:-R/wasaaraha Ingiriiska David Cameron: "TFGDa way fashilantay..wararka maanta Nov,15/2011
R/wasaaraha Ingiriiska David cameron: "TFGda way fashilantay, waxayna ku guuleysan weysay inay wax ka qabato xaalada wadanka, siiba Amniga,burcad badeeda iyo soo celinta nidaamkii dowladeed ee lumay iyadoo
R/wasaaraha Ingiriiska ayaa sheegay in ay dowladiisu arimaha Somaliya ee murugsan tallaabo wax ku ool ah ka qaadi doonto sidii ay kaalin muuqda uga qaadan lahayd nabad iyo xasilooni ka dhalata Somaliya oo ah dal ay fowdo ka taagneed mudo dheer.
David Cameron ayaa ku nuux nuuxsaday in dalkiisa uu ku qabanayo shir caalami ah, kaasi oo looga hadlayo arrimaha wadanka Somaliya sanadkan cusub ee soo socda halkaasina lagu dhameyn doono waxii qilaafaad ah ee dhinackasta ah.
Ra'iisal Wasaaraha Ingiriiska mar uu qudbad dheer ka jeedinayay xarunta ganacsiga magaalada London oo ay fadhiyeen siyaasiyiin iyo ganacsato miisaan culus ku leh siyaasada wadankiisa ayaa si toos ah u sheegay in Dowlada Somaliya ay fashilantay, isla markaana ku guuleysan weysay inay wax ka qabato xaaladda wadanka, gaar ahaan amniga iyo burcad badeeda, wuxuuna cadeyay in shirkaasi looga hadlayo sidii wadanka Somaliya looga qaban lahaa kooxaha argagixisada ah ee ku sii faafaya geeska Africa.
David Cameron ayaa sheegay in Somaliya lagu qafaashay samafalayaal u dhashay Britanin, kuwaasi oo ay afduubteen dabley xiriir la leh kooxaha argagixisada ah ee Shabaab iyo Al-Qaacida, sidaasi darteedna waxa uu tilmaamay in shirka ay ka soo qeyb gelayaan dhamaan qeybaha Somalida, madax ka socota caalamka, gaar ahaan dalalka Afrika, Carabta, Yurub iyo Mareykanka oo ah wadamada daneeya arimaha Somaliya.
Dowlada Ingriiska waxey ka mid tahay wadamada ay dhaqaalo badan ka soo geli jireen dalka Kenya maadama ay ku leeyahiin shirkado waaweyn iyo beero muwaadiniin badan oo u dhashay dalkeedana ay ku nool yahiin halkaasi si looga hortago argagixisada ku faafeysa geeska Africa waxey isku dayeysaa iney shir iskugu keento dhincayada Somalida inta aanba la garin doorashada soo socota.
Warar aan la hubin ayaa shegaya in doorashada soo socota aan lagu qaban karin gudaha Somaliya maadaama labada Shariif midna lagu eedeynayo inuu kooxahan xag jirka ah gacansar la leyahay, gudoomiyaha baarlamankane uusan diyaar u aheyn inba dalka Somaliya ka dhalato nidaam iyo kala danbeyn oo ku faraxsan sida ay hada howshu u socoto.
Marka si looga hortago musuqmaasuq iyo wax isdaba marsiin waxey u badan tahay in mid ka mid ah wadamada deriska lagu qabto siiba Kenya amaba Ugandha halkasina ay ka dhalato dowlad rasmi ah oo aan aheyn kumeel gaar.hadalkan uu jeediyey R/wasaaraha Ingiriiska ayaa laga yaaba inuu si toos ah u hakiyo dhaqaalahii ay wadamada Yurub oo ay Ingiriiska ku jiro siin jireen TFGda inta uu wadanku ka yeelanayo dowlad rasmi ah oo diyaar u ah iney soo celiso nidaamkii iyo kala danbeyntii.